Barazy, fandorana kodiarana: noravan’ny Emmo/Reg ny hetsiky ny K25 | NewsMada
Barazy, fandorana kodiarana: noravan’ny Emmo/Reg ny hetsiky ny K25
Vao niandoha ny taona, nirarakompana nandritra ny ora maro ny baomba mandatsa-dranomaso tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey, omaly. Rakitra ny barazy sy ny sakan-dalana. Nisy ny naratra sy ny voasambotra. Nosakanan’ny Emmo/Reg hatramin’ny fotoana farany ny hetsiky ny K25.
Nikasa ny hanohy ny hetsika ambara fa hitakiana ny fahamarinana tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey ny K25. Nirefodrefotra anefa ny lakrimozena nandravana izany teo Analakely sy ny manodidina, nanomboka tamin’ny 11 ora sy sasany. Niato kely izany tamin’ny 2 ora hatramin’ny 4 ora ary niverina nandaroka baomba mandatsa-dranomaso indray avy eo ny Emmo/Reg. Vokany, vehivavy iray naratra mafy teo amin’ny tanany ary nentina tetsy amin’ny HJRA. Mbola nisy vehivavy iray hafa sy lehilahy roa koa naratra ary nalefa notsaboina etsy Tsaralalàna sy ny HJRA. Ankoatra izany, roa lahy voasambotra ka anisan’izany ilay antsoina hoe Bota. Nitohy amin’ny fametrahana sakan-dalana sy fandorana kodiarana fiarakodia izany. Nataon’ny mpitandro filaminana hazalambo avokoa ireo olona nandositra hatreny amin’ny Eplanade, tohatoha-bato, Conforama Tsaralalàna, Gara Soarano, Behoririka… Potika sy rava kosa ny ampahany amin’ny fefy etsy amin’ny lapan’ny Tanàna. Nialohavan’ny fifampiraharahana teo amin’ny mpitarika ny K25 sy ny lehiben’ny mpitandro filaminana izany rehetra izany ny maraina, saingy mazava ny valin-kafatry ny Emmo/Reg fa tsy nahazoana alalana ny hetsika.
Tsy azo an-telefaonina…,“ecran géant”
Nantsoin’ny mpitarika ny “prefet de Police”, saingy voalaza fa tsy azo an-telefaonina hono. Niely ny feo avy eo ny tolakandro fa afaka miditra ny kianjan’ny 13 mey ireo vahoaka, araka ny toromarika avy amin’ny tompon’andraiki-panjakana. Nametrahana fepetra anefa izany fa tsy tokony hampiasaina na halefa ilay fahitalavitra telo lehibe, “ecran géant” tetsy amin’ny “Parvis” manoloana ny lapan’ny Tanàna, tokony hanehoana ny ambaran’izy ireo fa hosoka sy hala-bato… Tsy nisy tohiny anefa izany avy eo fa nitohy indray ny fandefasana baomba mandatsa-dranomaso.
Etsy andaniny, tapaka tanteraka ny lalàna rehetra miditra an’Analakely ka tsy afa-niditra ireo fiara sy ny olon-tsotra, nanomboka tamin’ny 11 ora mahery. Nikatona avokoa ireo mpivarotra rehetra manodidina ny araben’ny Fahaleovantena.
Tsiahivina fa tsy nahazo alalana tahaka ny tamin’ny asabotsy teo ihany ity hetsika nataon’ny K25 tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey, omaly ity.